अनुहारको चाउ'रीपना हटाएर जवान देखिन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय - Nawalpur Dainik
अनुहारको चाउ’रीपना हटाएर जवान देखिन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
चा’उरीपना हटाउने क्रिम त बजारमा जति पनि किन्न पाइन्छ । तर, अ’नुहारलाई कुनै हानी नगरी छोटो समयमा नै अनुहारमा भएका चाउरीपना हटाउने क्रिम पाउन भने निकै मुस्किल पर्दछ । अझ घरैमा प्राकृतिक रुपमा तयार पारिएको क्रिम किन्न त झनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले यसपटक हामीले तपाईहरु माझ यस्तो विधि ल्याएका छौं, जसले तपाईको अनुहारमा भएको चाउरीपनालाई त हटाउँछ नै, यो क्रिम घरैमा बसेर जो कोहीले बनाउन सक्ने भएकाले यसको प्रयोगले अनुहारमा अन्य हानी समेत हुन दिँदैन । जुन प्राकृतिक हुनुका साथै किफायती पनि छ ।
चा’उरीपना हटाउने क्रिम बनाउन आ’वश्यक पर्ने सामाग्रीः १) दुई चिया चम्चा बराबर भ्यासिलिन । २) दुई चिया चम्चा बराबर बदाम तेल वा ओलिभ तेल । ३) एउटा अण्डाको पहेलो भाग । ४) एक चिया चम्चा मह । ५) एउटा पाकेको एभोकार्डो ।
तयार पार्ने विधिः १) हल्का नरम नभएसम्म भ्यासिलिनलाई केही समयका लागि स्टोभ, ग्यासमा माइक्रोवेभमा तताउने । २) त्यसमा महलाई पनि मिसाएर राम्ररी चलाउने । अब अण्डालाई अन्तिममा हाल्ने गरी पहिले भएका सबै सामाग्रीलाई त्यसमा मिसाउने र राम्ररी फिट्ने । जबसम्म त्यो बाक्लो लेदो हुँदैन । अब त्यो मिश्रणलाई बिर्को भएको भाँडोमा हाल्ने र मज्जाले हल्लाउने ।
प्रयोग गर्ने विधिः १) सबैभन्दा पहिले उक्त मिश्रणलाई पाँच मिनेटसम्म त्यत्तिकै छाडिदिने । २) अब राम्ररी मुख धोएर अनुहारलाई सुख्खा बनाउने र उक्त मिश्रणलाई अनुहारको वरिपरि समानरुपले लगाउने । ३) अब हातका औंलाको मद्दतले अनुहारको वरिपरि गोलगोल गरी केहीबेर मसाज गर्ने । ४) कम्तिमा ३० मिनेटसम्म क्रिमलाई अनुहारमै रहन दिएर कपास वा रुमालको सहायताले उक्त मिश्रणलाई निकाल्ने । यो प्रक्रियालाई केही हप्तासम्म निरन्तरता दिएको खण्डमा अनुहारमा परेको चाउरी कम हुँदै जान्छ । याे पनि पढ्नुहाेस् !
यो हो चामलको पिठो प्र’योग गरेर अ’नुहार चम्किलो ब’नाउने उपा’य: छा’लासँग जोडिएका कतिपय स’मस्यालाई घरमा नै सजिलै उपलब्ध हुने सा’माग्रीबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो भान्छामा कतिपय यस्तो सा’माग्री हुन्छन् जसको प्रयोग गर्न जानियो भने धेरै स’मस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता घरेलु उपायको मुख्य फाइदा भनेको साइडइफेक्ट नहुनु हो । साथै यसको लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत पर्दैन । यस्तै सामाग्री मध्ये चामलको पिठो पनि एक हो, जसको प्रयोग त्वचासँग जोडिएका स’मस्याहरु समाधानको लागि गरिन्छ । आज हामी चामलको पिठो प्रयोग गरेर विभिन्न स’मस्याको समाधान गर्ने उपायको बारेमा जानकारी दिँदै छौँ ।
१) आँ’खा तल्लो भागमा देखिने कालो घेरालाई हटाउनको लागि- दुई चम्चा चा’मलको पिठोमा पाकेको केरा वा एक चम्चा बदामको तेल राखेर फिट्ने । तयार भएको पेष्टलाई कालो घेरा लगाउने । यस्तो प्रक्रिया दिनहुँ गर्नाले स’मस्या समाधान हुन्छ ।
२) कालो दाग र मुसा आउने स’मस्याको लागि उपयोगी- चामलको पिठोमा एक चम्चा मह र ध्युकुमारीको जेल मिलाएर पेष्ट बनाउने। उक्त पेष्टलाई प्रभावित ठाउँमा लगाउने गर्नाले कालो दाग र आएको मुसा हराएर जान्छ ।
३) घामले डढेको छा’लाको कालो धब्बालाई हटाउन मद्दतगार- एक चम्चा चामलको पिठोमा का’गतीका रस मिलाएर पेष्ट बनाउने। तयारी पेष्टलाई डढेको छा’लामा लगाएर सुस्क दिने र सुकिसकेपछि हल्का मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्दछ ।
४) अ’नुहारमा देखिने बुढौलिपन हटाउनको लागि- चा’मलको पिठो जवान देखिने एक राम्रो सामाग्री हो । अनुहारमा कम उमेरमै बुढौलिपन देखिने नदिनको लागि अण्डामा चामलको पिठो मिलाएर त्यसमो दुई थोपा ग्लिसरीन राख्ने । यसरी तयार भएको प्याकलाई अनुहारमा लगाउने र सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्दा अनुहारमा चमक आउनुको साथै जवान पनि देखिन्छ ।
Prevड’ण्डीफोरबाट सधैँका लागि छु’टकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
Nextजस्तोसुकै का’लो खुट्टालाई पनि यसरी बनाउनुहोस् केही मिनेटमै चमकदा’र